တရုတ်အထူးသံ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို တရုတ်-အာဆီယံထိပ်သီးမဖိတ်တဲ့ သတင်းစကားပါးခဲ့ပုံရလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေသုံးသပ်
အာရှရေးရာ တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကို တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာ အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူဘဲ တရုတ်-အာဆီယံထိပ်သီအစည်းအဝေးပွဲအတွက် အဓိက သတင်းစကားပါးချင်ပုံရတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။
လာမယ့်သီတင်းပတ်၊ တရုတ်နိုင်ငံကလက်ခံကျင်းပမယ့် ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မတက်ဖို့ အာဆီယံနိုင်ငံတချို့က. လိုလားတာကို တရုတ်နိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ် Sun Guoxiang က အားနာစွာနဲ့ အသိပေးခဲ့ပုံရတယ်လို့၊ တရုတ်-မြန်မာ-အာဆီယံအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာ့အကျပ်အတည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းရှာဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အကြံပေး Panitan Wattanayagorn နဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် Stimson Center က တရုတ်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမူး Yun Sun တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ဒီတခေါက် တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ခရီးက သြဂုတ်လခရီးစဉ်နဲ့အဓိကကွာပုံကို ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် Stimson Center က အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ပူးတွဲညွှန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ Yun Sun က အခုလို စရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီတခေါက် တရုတ်ရဲ့ အဓိက မှာကြားချက်ခေါင်းစဉ်က အရင်တစ်ခေါက်နဲ့အရမ်းကို ကွာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်တုံးကတော့ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြား ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းအပေးအယူလုပ်ဖို့ အနေအထား ရှိမလားဆိုတာကို သွားဆွေးနွေးတီးခေါက်ကြည့်တာပါ။ဒီတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်ကတော့ အာဆီယံကပြန်ပြောလိုက်တဲ့ သတင်းစကားကို သွားပါးဖို့ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဒီစကားကတော့ တရုတ်အတွက် မပြောချင်ပေမဲ့လို့အခုတရုတ်အာဆီယံထိပ်သီးမှာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကို ပေးမတက်ဖို့ အာဆီယံဘက်ကဆုံးဖြတ်ထားတာကို တရုတ်ဘက်က လိုက်လုပ်ပေးရမဲ့သဘောသက်ရောက်တဲ့ သတင်းစကားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။”
အဲဒီတော့ ဘာကြောင့် တရုတ်ဘက်က အခုလို မပြောချင်ခဲ့ရတာပါလဲလို့ မေးရာမှာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း နီးစပ်တဲ့ Yun Sun က အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဒီနှစ်မှာ စစ်အာဏာမသိမ်းခဲ့ရင် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တရုတ်-အာဆီယံကြား ဆက်ဆံရေးနဲ့ ကိစ္စရပ်တွေညှိုနှိုင်းရေးအကုန်လုံးမှာ အထူးအဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့၊ တရုတ်အာဆီယံအကြား ပေါင်းစပ်ညိနှိုင်းပေးရေး တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတာပါ။ ဒီအခန်းကဏ္ဍကို မလုပ်နိုင်တော့တာအပြင် အခုလာမယ့်ထိပ်သီးပွဲမှာပါ မတက်ရဖို့ များနေပါတယ်။ အဓိက ဖိအားကတော့ အာဆီယံ ၄ နိုင်ငံကပါ၊ ဒီအထဲမှာ တရုတ်အထူးသံ မြန်မာကိုမလာခင် သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဘရူနိုင်းနဲ့စင်္ကာပူလဲပါပါတယ်။”
နောက်ထပ် ဖိအားပေးတဲ့နှစ်နိုင်ငံကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားတို့ပါလို့ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောနေချိန်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာရွတ် ချန်အိုချာရဲ့လုံခြုံရေးအကြံပေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပန်နိတန် ကတော့ အခု မြန်မာကိစ္စ တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“တရုတ်အနေနဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး နောက်ဆုံးလုပ်မဲ့ ပုံစံကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။အခုက မြန်မာကို ဒီထိပ်သီးပွဲဖိတ်နိုင်ရေး အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ သွားစည်းရုံးခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ခေါင်းဆောင်တွေအကြား ပြောခဲ့တာသာ ရှိပါသေးတယ်။ဒါက တရုတ်နဲ့အာဆီယံ ၂ ဘက်အကြား ထိပ်သီးပွဲအတွက်ဖြစ်တာမို့ အလွန်ကို အရေးပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ ဘက်လုံးအနေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ထိပ်သီးပွဲဖြစ်လာဖို့ သတ်မှတ်ချက်အနေအထားတွေ အရင်သဘောတူဖို့လိုပါတယ်။ မတူတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြား ကွဲပြားတဲ့ရပ် တည်ချက်တွေရှိနေတာမို့ တရုတ်နဲ့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ဒီကိစ္စ ညှိဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့က ရှေ့သီတင်းပတ်မတိုင်ခင် အချိန်ကျန်နေပါသေးတယ်။”
ဒီတော့ လက်ရှိ အခုလိုဖြစ်နေတာရဲ့ အဓိကပြဿနာကိုမေးရာမှာ တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ Yun Sun က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“လက်ရှိပြဿနာက စစ်ကောင်စီရဲ့ တရားဝင်မှုကို ပြည်တွင်းမှာရော နိုင်ငံတာကာမှာပါ အခုမြန်မာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဒေသတွင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်း လက်တွေ့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ကြသေးတာပါ။ဒါက စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူတရားဝင်နိုင်တဲ့ အာဏာရယူထားတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆနိုင်ပေမယ့် ဒီတရားဝင်မူကို နိုင်ငံတကာမှာရနိုင်ဖို့က လက်တွေ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေမှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအခြေအနေမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆို တာနဲ့ လိုချင်တဲ့အနေအထားရောက်နိုင် မနိုင်ကို ပြန်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ ဖိအားပေးချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။”
ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲလို့ဆက်မေးရာမှာ အရင် အရင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိပိုင်ရဲ့ ပြောခွင့်ရဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါမောက္ခလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာပန်နိတန်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“အိမ်နီးချင်းကောင်းအဖြစ် ကျွန်တော်လည်းပါတဲ့ ထိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုအခြေအနေကို အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက မတူညီတဲ့အဖွဲ့တွေရော၊ အခုဒေသတွင်းက ကွဲပြားနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပါ အားလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့ အဖြေတခုပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့တွေအားလုံး ဝိုင်းညှိုပေးကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အခုလာမဲ့ အာဆီယံဆိုင်ရာထိပ်သီးပွဲတွေအတွက် အောင်မြင်မူတွေပိုမရမှာ အထူးစိုးရိမ်နေပါတယ်။”
ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကို အခု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကပယ်ပြီး ဖိအားပေးရုံနဲ့ မြန်မာ့ပြဿနာအဖြေထွက်ဖို့ မသေချာဘူး၊ ရှေ့ဆက် APEC - အာရှပစိဖိတ် စီးပွါးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်နဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးပွဲအတွက်လည်း ဆက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ ပါမောက္ခ ပန်နိတန်က ထောက်ပြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဘယ်လို ဆက်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်ခြေရှိသလဲဆိုတာကို ဆက်မေးရာမှာ Yun Sun က လည်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာအနေနဲ့ အခုလက်ရှိ အကြပ်အတည်းကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ တကယ်တမ်း မဖြစ်လာကောင်း မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ အားလုံးက သိထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှု ရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရှည်ကောင်းရှည်သွားနိုင်တာကိုလည်း အားလုံးက မြင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးရဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာညှိုနိုင်းနိုင်ဖို့ စစ်ကောင်စီနဲ့ NLD ကြား၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြား အပေးအယူလုပ်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းလေးများ ပေါ်လာလေမလားလို့ အများစုက ဆက်မျှော်လင့်လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။”
ဒါ့အပြင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း အခု ပြဿနာကိုကျော်နိုင်ဖို့ ခက်တာကို သတိပြုမိဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် စစ်တပ်ကပြောနေသလို နိုင်ငံကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရာမရောက်ဘဲ အရင်လို အထီးကျန် ပြန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တရုတျအထူးသံမွနျမာစဈခေါငျးဆောငျကို တရုတျ-အာဆီယံထိပျသီးမဖိတျတဲ့ သတငျးစကားပါးခဲ့ပုံရလို့ ကြှမျးကငျြသူတှသေုံးသပျ
အာရှရေးရာ တရုတျအထူးကိုယျစားလှယျမွနျမာစဈကောငျစီခေါငျးဆောငျကို တှဆေုံ့ခဲ့တာဟာ အရငျတဈခေါကျနဲ့မတူဘဲ တရုတျ-အာဆီယံထိပျသီအစညျးအဝေးပှဲအတှကျ အဓိက သတငျးစကားပါးခငျြပုံရတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ သုံးသပျလိုကျပါတယျ။
လာမယျ့သီတငျးပတျ၊ တရုတျနိုငျငံကလကျခံကငျြးပမယျ့ ဒီထိပျသီးစညျးဝေးပှဲမှာ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျမတကျဖို့ အာဆီယံနိုငျငံတခြို့က. လိုလားတာကို တရုတျနိုငျငံ အထူးကိုယျစားလှယျ Sun Guoxiang က အားနာစှာနဲ့ အသိပေးခဲ့ပုံရတယျလို့၊ တရုတျ-မွနျမာ-အာဆီယံအရေးကြှမျးကငျြသူတှကေဆိုပါတယျ။ ဒသေတှငျးနိုငျငံတှအေနနေဲ့ မွနျမာ့အကပျြအတညျး ဘယျလိုနညျးလမျးရှာဖွရှေငျးကွမလဲ ဆိုတဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျအကွံပေး Panitan Wattanayagorn နဲ့ အမရေိကနျအခွစေိုကျ Stimson Center က တရုတျဌာန ညှနျကွားရေးမူး Yun Sun တို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ဒီတခေါကျ တရုတျအထူးကိုယျစားလှယျခရီးက သွဂုတျလခရီးစဉျနဲ့အဓိကကှာပုံကို ဝါရှငျတနျအခွစေိုကျ Stimson Center က အရှအေ့ာရှဆိုငျရာ ပူးတှဲညှနျကွားရေးမှူးလညျးဖွဈတဲ့ Yun Sun က အခုလို စရှငျးပွပါတယျ။
“ဒီတခေါကျ တရုတျရဲ့ အဓိက မှာကွားခကျြခေါငျးစဉျက အရငျတဈခေါကျနဲ့အရမျးကို ကှာပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉျတုံးကတော့ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှအေကွား ဆှေးနှေးညှိုနှိုငျးအပေးအယူလုပျဖို့ အနအေထား ရှိမလားဆိုတာကို သှားဆှေးနှေးတီးခေါကျကွညျ့တာပါ။ဒီတဈခေါကျခရီးစဉျကတော့ အာဆီယံကပွနျပွောလိုကျတဲ့ သတငျးစကားကို သှားပါးဖို့ ဖွဈပုံရပါတယျ။ဒီစကားကတော့ တရုတျအတှကျ မပွောခငျြပမေဲ့လို့အခုတရုတျအာဆီယံထိပျသီးမှာ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျကို ပေးမတကျဖို့ အာဆီယံဘကျကဆုံးဖွတျထားတာကို တရုတျဘကျက လိုကျလုပျပေးရမဲ့သဘောသကျရောကျတဲ့ သတငျးစကားမြိုးဖွဈနပေါတယျ။”
အဲဒီတော့ ဘာကွောငျ့ တရုတျဘကျက အခုလို မပွောခငျြခဲ့ရတာပါလဲလို့ မေးရာမှာ တရုတျခေါငျးဆောငျတှနေဲ့လညျး နီးစပျတဲ့ Yun Sun က အခုလို ဆကျပွောပါတယျ။
“ဒီနှဈမှာ စဈအာဏာမသိမျးခဲ့ရငျ မွနျမာအစိုးရအနနေဲ့ တရုတျ-အာဆီယံကွား ဆကျဆံရေးနဲ့ ကိစ်စရပျတှညှေိုနှိုငျးရေးအကုနျလုံးမှာ အထူးအဓိကကတြဲ့ အခနျးကဏ်ဍကနေ လုပျဆောငျပေးဖို့၊ တရုတျအာဆီယံအကွား ပေါငျးစပျညိနှိုငျးပေးရေး တာဝနျကိုယူခဲ့ရတာပါ။ ဒီအခနျးကဏ်ဍကို မလုပျနိုငျတော့တာအပွငျ အခုလာမယျ့ထိပျသီးပှဲမှာပါ မတကျရဖို့ မြားနပေါတယျ။ အဓိက ဖိအားကတော့ အာဆီယံ ၄ နိုငျငံကပါ၊ ဒီအထဲမှာ တရုတျအထူးသံ မွနျမာကိုမလာခငျ သှားရောကျဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ ဘရူနိုငျးနဲ့စင်ျကာပူလဲပါပါတယျ။”
နောကျထပျ ဖိအားပေးတဲ့နှဈနိုငျငံကတော့ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားတို့ပါလို့ သံတမနျအသိုငျးအဝိုငျးက ပွောနခြေိနျမှာ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ပရာရှတျ ခနျြအိုခြာရဲ့လုံခွုံရေးအကွံပေးကျောမတီဥက်ကဋ်ဌ ပနျနိတနျ ကတော့ အခု မွနျမာကိစ်စ တရားဝငျဆုံးဖွတျခကျြရဖို့အခြိနျရှိသေးတယျလို့ဆိုပါတယျ။
“တရုတျအနနေဲ့ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျအားလုံးနဲ့ ဆှေးနှေးပွီး နောကျဆုံးလုပျမဲ့ ပုံစံကို လူသိရှငျကွား ထုတျမပွောသေးပါဘူး။အခုက မွနျမာကို ဒီထိပျသီးပှဲဖိတျနိုငျရေး အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှေ သှားစညျးရုံးခဲ့တဲ့ အခွအေနကေို ခေါငျးဆောငျတှအေကွား ပွောခဲ့တာသာ ရှိပါသေးတယျ။ဒါက တရုတျနဲ့အာဆီယံ ၂ ဘကျအကွား ထိပျသီးပှဲအတှကျဖွဈတာမို့ အလှနျကို အရေးပါတယျလို့မွငျပါတယျ။ ဒီ ၂ ဘကျလုံးအနနေဲ့ အောငျမွငျတဲ့ထိပျသီးပှဲဖွဈလာဖို့ သတျမှတျခကျြအနအေထားတှေ အရငျသဘောတူဖို့လိုပါတယျ။ မတူတဲ့အာဆီယံနိုငျငံတှအေကွား ကှဲပွားတဲ့ရပျ တညျခကျြတှရှေိနတောမို့ တရုတျနဲ့ အားလုံးဝိုငျးပွီး ဒီကိစ်စ ညှိဖို့လိုပါတယျ။ နောကျဆုံး ဘယျလိုဖွဈလာမှာကို ဆုံးဖွတျနိုငျဖို့က ရှသေီ့တငျးပတျမတိုငျခငျ အခြိနျကနျြနပေါသေးတယျ။”
အဲဒီတော့ လကျရှိ အခုလိုဖွဈနတောရဲ့ အဓိကပွဿနာကိုမေးရာမှာ တရုတျ-အမရေိကနျ ဆကျဆံရေးလညျး ကြှမျးကငျြတဲ့ Yun Sun က အခုလို ရှငျးပွပါတယျ။
“လကျရှိပွဿနာက စဈကောငျစီရဲ့ တရားဝငျမှုကို ပွညျတှငျးမှာရော နိုငျငံတာကာမှာပါ အခုမွနျမာ အဖှဲ့ဝငျဖွဈနတေဲ့ ဒီဒသေတှငျးအဖှဲ့တှမှောလညျး လကျတှေ့ အသိအမှတျမပွုနိုငျကွသေးတာပါ။ဒါက စဈကောငျစီအနနေဲ့ သူ့ကိုယျသူတရားဝငျနိုငျတဲ့ အာဏာရယူထားတယျလို့ ထငျမွငျယူဆနိုငျပမေယျ့ ဒီတရားဝငျမူကို နိုငျငံတကာမှာရနိုငျဖို့က လကျတှနေို့ငျငံရေး အခွအေနမှော မဖွဈနိုငျပါဘူး။ဒီအခွအေနမှော စဈကောငျစီနဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျအနနေဲ့ ဘာကွောငျ့ ရှဆေ့ကျတိုးဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးဆို တာနဲ့ လိုခငျြတဲ့အနအေထားရောကျနိုငျ မနိုငျကို ပွနျစဉျးစားနိုငျဖို့ ဖိအားပေးခကျြဖွဈလာနိုငျပါတယျ။”
ဒီပွဿနာကို ဘယျလို ဖွရှေငျးသငျ့ပါသလဲလို့ဆကျမေးရာမှာ အရငျ အရငျထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ခြူအငျလိပိုငျရဲ့ ပွောခှငျ့ရဖွဈခဲ့ပွီး လကျရှိ ခြူလာလောငျကှနျးတက်ကသိုလျ နိုငျငံရေးသိပ်ပံ ပါမောက်ခလညျးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာပနျနိတနျက အခုလို ပွောပါတယျ။
“အိမျနီးခငျြးကောငျးအဖွဈ ကြှနျတျောလညျးပါတဲ့ ထိုငျးပွညျသူတှအေနနေဲ့ အခုအခွအေနကေို အထူးစိုးရိမျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျးက မတူညီတဲ့အဖှဲ့တှရေော၊ အခုဒသေတှငျးက ကှဲပွားနတေဲ့အဖှဲ့တှအေားလုံးပါ အားလုံးအတှကျကောငျးတဲ့ အဖွတေခုပျေါလာဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အဖှဲ့တှအေားလုံး ဝိုငျးညှိုပေးကွဖို့လိုပါတယျ။ဒါမှမဟုတျရငျတော့ အခုလာမဲ့ အာဆီယံဆိုငျရာထိပျသီးပှဲတှအေတှကျ အောငျမွငျမူတှပေိုမရမှာ အထူးစိုးရိမျနပေါတယျ။”
ဒါပမေယျ့ မွနျမာစဈကောငျစီခေါငျးဆောငျကို အခု ထိပျသီးအစညျးအဝေးပှဲကပယျပွီး ဖိအားပေးရုံနဲ့ မွနျမာ့ပွဿနာအဖွထှေကျဖို့ မသခြောဘူး၊ ရှဆေ့ကျ APEC - အာရှပစိဖိတျ စီးပှါးရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဖိုရမျနဲ့ အာဆီယံထိပျသီးပှဲအတှကျလညျး ဆကျစိုးရိမျနရေတယျလို့ ပါမောက်ခ ပနျနိတနျက ထောကျပွပါတယျ။ အဲဒီတော့ မွနျမာ့အရေး နိုငျငံတကာအနနေဲ့ဘယျလို ဆကျပွီးဖွရှေငျးနိုငျခွရှေိသလဲဆိုတာကို ဆကျမေးရာမှာ Yun Sun က လညျး အခုလို ပွောပါတယျ။
“မွနျမာအနနေဲ့ အခုလကျရှိ အကွပျအတညျးကနေ ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ တကယျတမျး မဖွဈလာကောငျး မဖွဈလာနိုငျဘူးလို့ အားလုံးက သိထားပါတယျ။ နိုငျငံတကာရဲ့အသိအမှတျပွုမှု ရသညျဖွဈစေ မရသညျဖွဈစေ၊ စဈအုပျခြုပျရေး ရှညျကောငျးရှညျသှားနိုငျတာကိုလညျး အားလုံးက မွငျထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးရဖို့ ငွိမျးခမျြးစှာညှိုနိုငျးနိုငျဖို့ စဈကောငျစီနဲ့ NLD ကွား၊ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကွား အပေးအယူလုပျနိုငျမယျ့ လမျးကွောငျးလေးမြား ပျေါလာလမေလားလို့ အမြားစုက ဆကျမြှျောလငျ့လုပျဆောငျနကွေတာပါ။”
ဒါ့အပွငျ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျအနနေဲ့ လကျရှိအခွအေနအေတိုငျး အခု ပွဿနာကိုကြျောနိုငျဖို့ ခကျတာကို သတိပွုမိဖို့လိုတယျ၊ ဒါမှမဟုတျရငျ စဈတပျကပွောနသေလို နိုငျငံကို ကာကှယျထိနျးသိမျးရာမရောကျဘဲ အရငျလို အထီးကနျြ ပွနျဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ထောကျပွခဲ့ပါတယျခငျဗြာ။